Vaovao - Fanasokajiana sy toetra mampiavaka ny masinina sarontava
Masinina vatan'ny maska ​​feno famokarana mandeha ho azy, ao anatin'izany ny famahanana, ny fantsom-plastika vita amin'ny fantsom-boaloboka, ny fisafidianana an-tsehatra, ny fusion ultrasonika, ny fikolokoloana sns., Avo dia avo ny famokarana, afaka mamokatra 1-200 isa-minitra. Ny lalàna mifehy ny hafainganam-pandeha matetika dia mety ho haingana na miadana. Ny sarontava samihafa dia azo vokarina amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana samihafa. Ny vokatra dia misy sosona roa na telo, ary miorina ny kalitaon'ny vokatra, mety ny fandidiana, ambany ny tabataba ary kely ny velaran'ny gorodona. Fitaovana azo ampiharina: lamba tsy misy tenona vita amin'ny filamenta spunbonded, 16-30g / m2, mety amin'ny fanodinana saron-tava azo ampiasaina.
Famolavolana fanontam-pirinty mafana: ny akora masika (lamba tsy tenona) ary ny endrika fanindriana mafana (endrika kaopy). 1. Anisan'izany ny fiverenana mandeha ho azy sy ny fisakafoanana; 2. Mamolavola saron-tava efatra isaky ny mandeha.
Soso: ampiasaina hanamboarana sosona ivelany (saron-tava miaro) saron-tava. Ny fitaovana vy vita amin'ny firaka manokana dia ampiasaina hanamboarana kodiarana voninkazo. Tsy mahazaka akanjo ny volo ary lava ny androm-piainany. Ny fanitsiana karazana fototra eccentric dia malefaka, haingana ary avo lenta. Amin'ny fampiasana ny onja ultrasonic sy ny fanodinana kodiarana vy manokana dia tsy ho simba ny sisin'ny lamba, tsy mila hafanana rehefa manamboatra tsy misy burr, ary azo ampiasaina tsy tapaka.
Tompon'ny banga: tsindrio ny sosona anatiny sy ivelany amin'ny sarontava
Fanetezana: ampiasao ny stamping pneumatika hanapahana ny sisin'ny maska ​​be loatra.
Fanamafisana ny valizy miaina: valizy manavanana
Faritra welding: 130mm
Hafainganana: 20-30 / min
Ny rafitra mitambatra amin'ny vatan'ny masinina dia mandray ny fifehezana ny refin'ny fiarovana; ny fanaraha-maso manan-tsaina amin'ny solosaina dia afaka mahatratra ny fahamarinan'ny ampaha-iray segondra; ny fanitsiana ny haavon'ny bobongolo, ny motera fiaramanidina dia miakatra sy midina avy hatrany, ary ny fanitsiana marindrano.
Masinina fanamafisam-peo amin'ny tadin'ny sofina: hafainganam-pandeha: 8-12 tapa / min. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fiaramanidina welding, fehikibo anatiny / fehikibo ivelany, saron-tava mahazatra, karazana vavam-gana ary karazan-tava hafa miendrika manokana. Aorian'ny famokarana ny vatan'ny sarontava, ny tadin'ny sofina dia soloina tanana
Ny masinina saron-tsofina anaty ultrasonika dia mampiasa fomba fanamafisam-peo ultrasonika. Rehefa afindra amin'ny toeran'ny fanodinana ilay sarontava dia hateraka ho azy ny onja ultrasonic. Ny fihoaran'ny amplitude micro sy ny fahita matetika dia hatsangana amin'ny fehikibo, ary hovaina ho hafanana eo noho eo. Ny fitaovana ho zahana dia ho levona, ary ny tadin'ny sofina dia hapetaka maharitra na hapetraka ao amin'ny ilan'ny atin'ny maska. Izy io dia fomba fiasa amin'ny famokarana saron-tava amin'ny sofina anatiny, izay tsy mila afa-tsy mpandraharaha iray. Ny vatan-tava dia napetraka ao anaty mason-tsofina, ary ny hetsika manaraka dia mandeha ho azy avy hatrany mandra-pahavitan'ny vokatra vita.
Fomba fiasa: (vatan-tava) famahanana tanana → fehikibo fihinana mandeha ho azy → welding tariby ultrasonika → famahanana sy famonosana lamba tsy misy tenona → fantsom-pitaovana amin'ny lafiny ultrasonic → fanapahana fehin-kibo → vokatra vita → Ny fisiana ara- → fametrahana vokatra vita → mampita amin'ny alàlan'ny fitaovana fehikibo
Masinina misaron-tava, fantatra ihany koa amin'ny masinina saron-tava C, dia milina mandeha ho azy tanteraka amin'ny famokarana vatan-tava manafina. Mampiasà teknolojia ultrônônika izy io mba hampifamatotra lamba 3-5 an'ny lamba tsy tenona PP, karbonina sy fitaovana sivana nohafanaina, ary manapaka ny vatan'ny sarontava, izay afaka manodina 3m9001, 9002 ary ireo maska ​​hafa. Araka ny akora samihafa ampiasaina, ny sarontava novokarina dia afaka mifanaraka amin'ny fenitra isan-karazany toy ny FFp1, FFP2, N95, sns. Ny tadin-tsofina dia lamba vita amin'ny kofehy tsy vita amin'ny kofehy, izay mahatonga ny sofin'ilay mitondra mahazo aina sy tsy misy tsindry. Ny sosona lamba sivana amin'ny sarontava dia misy vokany tsara amin'ny sivana, izay mifanentana tanteraka amin'ny endrika tarehy aziatika, ary azo ampiharina amin'ny asa fanamboarana, fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ary indostrialy fandotoana ambony hafa.
Function sy endri-javatra:
1. Izy io dia afaka manodina 3m9001, 9002 ary vatana hafa misaron-tava hafa, izay azo vitaina indray mandeha.
2. Fanaraha-maso mandeha ho azy PLC, fanisana mandeha ho azy.
3. Fitaovana fanitsiana tsotra, mora refuel.
4. Ny lasitra dia mandray ny fomba fitrandrahana sy fanoloana, izay afaka manolo haingana ny bobongolo ary mamokatra karazana sarontava.
Ny masinina masom-bovoka ultrasonikaly feno automatique (masinina fanamboarana masom-bava) dia masinina izay afaka mamokatra maska ​​gana ho an'ny indostrian'ny fandotoana avo lenta amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fitsipiky ny welding tsy miharo volo ultrasonika. 4-10 sosona lamba PP tsy tenona sy fitaovana sivana (toy ny lamba mitsonika notsofina, fitaovana gazy karbonika, sns.) Azo ampiasaina amin'ny vatan'ilay maska ​​masinina, mba hamokarana ireo vokatra vita amin'ny ambaratonga fanivanana isan-karazany toy izany toy ny N95, FFP2, sns. Ary ity milina ity dia manana automatique avo lenta, manomboka amin'ny famahanana ka hatramin'ny vokatra vita dia andalana fandidiana mandeha ho azy: famahanana mandeha ho azy ny akora otrikaina, rafitra mpampitohy orona tsy miankina, ary afaka mamoritra tsipika orona amin'ny vodin-doha lamba, aforitra mandeha ho azy sy fanapahana vokatra vita, ary afaka manampy loaka valizy miaina. Ny vokatra novokarin'ny masinin'akaka gana dia manana endrika tsara tarehy, fahombiazana azo antoka, vokatra avo, taham-kilany ambany ary fandidiana mora.
Endri-javatra ny masinina gana gana:
1, Rafitra famahanana mandeha ho azy
2, Rafitra aforitra
3, Rafitra famehezana hafanana ultrasonic
4, Ny milina iray manontolo dia misy fahombiazana maharitra, haingam-pamokarana azo ovaina tsy tapaka, fahombiazan'ny famokarana avo lenta, hatramin'ny 60 isa-minitra, fanisana mety sy marina, taha ambony amin'ny fampiasana ny akora, fiasa tsotra sy mety ary fanitsiana, diplaoma avo lenta ary fihenam-bidy mahomby ny saran'ny asa.
milina clamping hosotra, milina fanaovana sarontava tarehy tsy tenona, masinina mpanamboatra sarontava tarehy, milina fanaovana sarontava, milina fanaovana maska ​​tsy tenona, masinina fanaovana maska ​​tarehy,